Ulapha : Ikhaya>Inkampani>Profile Company
I-Sunrise Chemical Industrial Co, Ltd (IShanghai Yusheng Sealing Material Co, Ltd) yinkampani ephakeme ye-ISO9001-2015 esebenza kakhulu ekucwaningeni nasekuthuthukiseni ukusetshenziswa kobuchwepheshe bokunamathela nokubopha uphawu. Asigcini nje ngokuba ngumanduleli ekwakheni izinamatheliso, kodwa futhi singomunye wabakhiqizi abakhulu be-PU e-China. Umbono wenkampani ukwakha umkhiqizo wemboni yonke futhi ube yisizinda sokukhiqiza ukunamathela komgangatho emhlabeni.
ISunrise Chemical Industrial inezisekelo ezimbili zakamuva zokukhiqiza ezinamathela esifundazweni iShanghai nesaseShandong, eChina, ezihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-70,000 futhi ifakwe imigqa yokukhiqiza ezenzakalelayo evela ngokuphelele evela eYurophu.
I-Sunrise Chemical Industrial inokulawulwa okuphelele kokukhiqiza kanye nohlelo lokuqinisekisa ikhwalithi. Sithole isitifiketi sekhwalithi yekhwalithi ye-ISO 9001-2015. Njengomholi wemakethe kuma-adhesive nama-foam we-PU, sekufakazelwe ukuthi sikwazi ukuhlinzeka abathengi baso ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nesebenzayo.
I-Sunrise Chemical Industrial 's brand "SUNRISE" ithola idumela eliphezulu nokuqwashisa ngomkhiqizo embonini ngemuva kweminyaka ecishe ibe ngu-20 yentuthuko. Imikhiqizo yethu ihlanganise izindawo ezahlukahlukene zezicelo, ezifana nokwakha, ukuhlobisa indlu, izinto ze-elekthronikhi, ukukhiqizwa kwezimoto, ezokuthutha izitimela, njll. Ngaphezu kwalokho, igwebu le-SUNRISE PU liqhubekele phambili emakethe yokwakha ephezulu.
Imikhiqizo yeSUNRISE ithengiswa emhlabeni wonke emazweni angaphezu kwama-50, njengeJalimane, United States, Russia, Japan, South Korea, India ne-Dubai. Abuye asetshenziswe kabanzi kumaphrojekthi amaningi amakhulu, njengeBeijing National Sports Center, Isikhungo Somhlaba Somhlaba Sokufunda, Jinmao Tower, Tomson Riviera, Graces Villa, Star River, Pudong International Airport, International Financial Center eBeijing, Citibank nase Russian Federal Building, futhi ngithole izimvo ezinhle ezivela kumakhasimende.
Silindele ukudala ikusasa elingcono embonini yamakhemikhali ndawonye nawe, bangani bami abathandekayo.